အမှိုက်လို့ထင်ထားကြတဲ့ ကြက်သွန်နီအခွံမှာ မယုံကြည်နိုင်စရာ အာနိသင်တွေ ရှိနေ ...! - APANNPYAY
Home / ထူးဆန်းထွေလာ / ဗဟုသုတအစုံ / အမှိုက်လို့ထင်ထားကြတဲ့ ကြက်သွန်နီအခွံမှာ မယုံကြည်နိုင်စရာ အာနိသင်တွေ ရှိနေ ...!
အမှိုက်လို့ထင်ထားကြတဲ့ ကြက်သွန်နီအခွံမှာ မယုံကြည်နိုင်စရာ အာနိသင်တွေ ရှိနေ ...!
Apann Pyay 6:14 PM ထူးဆန်းထွေလာ , ဗဟုသုတအစုံ Edit
ခြင်နှင့် ယင်ကောင်ကဲ့သို့သော အင်းစက်ပိုးမွှားတွေ အိမ်မှာရှိနေရင်တော့ ကြက်သွန်နီအခွံက ကူညီမောင်းထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ် ။ အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ကြက်သွန်နီအခွံ တစ်ညလုံးစိမ်ထားတဲ့ရေကို ခွက်ထဲအနည်းငယ်ထည့်ပြီး ပြတင်းပေါက် နှင့် အင်းစက်ပိုးမွှားရှိတတ်သော နေရာများတွင် ချထားပါ။ ကြက်သွန်နံ့ကြောင့် အင်းစက်တွေ အဝေးခွာပြေးသွားကြမှာပါ ။